Umphumela we-coriolis. Kuyini, kusebenza kanjani nokuthi kubaluleke kangakanani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El umphumela we-coriolis Kubizwa kabanzi kwisayensi ukubhekisa ethubeni lapho imisinga yamanzi nomoya inama-hemispheres ahlukahlukene. Kuthiwa lokho izivunguvungu neziphepho zizungeza ngapha nangapha eningizimu nenkabazwe enye eningizimu yezwe. Kungani lokhu kufanele? Okufanayo kuya emizimbeni yamanzi ngisho neqiniso elidumile lokujika okuphambene kwamanzi ethoyilethi kuma-hemispheres ahlukahlukene. Konke lokhu kunemiphumela yomphumela we-coriolis.
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngalo mphumela we-coriolis? Lapha sizokuchazela konke.
1 Uyini umphumela we-coriolis
2 Umphumela weCoriolis emeteorology kanye nolwandle
3 Kungani iziphepho ziphendukela kolunye uhlangothi?
Uyini umphumela we-coriolis
Umvunduli owayephethe ukuchaza le mbutho ngezibalo kwakunguGaspard-Gustave Coriolis. Kungenxa yalokhu ukuthi ithola leli gama hhayi elinye. Yatholwa ngo-1935 futhi isizile ukwazi okuningi kakhulu ngomhlaba nangendawo yonke. Kukho konke ukunyakaza okujikelezayo kunamandla e-coriolis.
Lo mphumela ulula ukuwuchaza. Kungamandla avela ngenxa yokujikeleza uMhlaba onawo kwi-eksisi yawo. Lokhu kujikeleza yikona okusenza sibe nemini nobusuku. Ngenxa yalokhu kuzungeza, imikhondo yezinto ezihambayo ebusweni bomhlaba iyaphambuka. Kusobala uma sikwenza kokuthile okuzungeza ngokushesha. Kanjalo noMhlaba. Kodwa-ke, ngenxa yamandla adonsela phansi, asinaki ukuthi uMhlaba ujikeleza ngokuqhubekayo futhi ngaphandle kokuma.
Umzila wezinto uphambuka kwesokudla sayo yonke into enyakatho Nenkabazwe nangakwesobunxele sayo yonke into eseNingizimu Nenkabazwe. Lesi yisizathu esenza izivunguvungu neziphepho zihambe ngezindlela ezahlukahlukene njengoba zitholakala enkabazwe eyodwa noma kwenye.
Lapho lo mphumela wenzeka, ukushesha okuhlobene nomzimba kwenzeka okuqondana nesivinini esihambisanayo okwamanje. Ngakho-ke, Ngokuya ngejubane lapho into ihamba khona, umphumela we-coriolis uzoqina noma cha.
Umphumela weCoriolis emeteorology kanye nolwandle
Amandla e-coriolis achazwe emaphepheni okuqala esayensi ngemuva kokutholakala kwawo njengamandla e-centrifugal. La mandla ngawomzimba onyakazayo ohambisana nohlelo oluyisethenjwa futhi oluzungezayo. Yilokhu okwenzekayo ngoMhlaba. Ukuze siyiqonde kahle, kufana nokufaka imabula ngegiya elihambayo. Umzila wayo uzoguqulwa kuye ngejubane lemabula, ngoba sizocabanga ukuthi ijubane eligijimela igiya lihlala njalo. Lokhu kwenzeka ngejubane lokujikeleza komhlaba, kuhlala kunjalo.
Ngalesi sizathu, ukuphambuka nokuphinyiselwa kwayo kokuthi umzila wezinto ezisebusweni bomhlaba onawo uzolungiswa ngejubane. Sizohlaziya ukubaluleka kwalomphumela emkhakheni wezemeteorology nolwandle.
Lapho kuhamba umoya noma amanzi amaningi, alandela ama-meridians asemhlabeni. Isivinini sayo, ngakho-ke, siyalungiswa kanye nokuhamba kwayo ngesenzo somphumela we-coriolis.
Lo mphumela usisiza ukuthi sazi ukuthi noma nini lapho kukhona ukunyakaza okujikelezayo, ama-vortices azolandela isimo esichaziwe. Lokhu kwenzeka ngeziphepho kanye nama-anticyclone kunoma iyiphi iplanethi hhayi eMhlabeni kuphela. Futhi, amandla we-coriolis ayenzeka ngokujikeleza kwelanga nezinkanyezi futhi.
Lo mphumela wenzeka ngendlela eqonde kakhulu enkabazwe njengoba kunjalo indawo lapho ijubane lomhlaba likhulu kakhulu. Emapalini kuhamba kancane. Lokhu kungenxa yokuthi enkabazwe, ibanga eliya enkabeni yoMhlaba likhulu.
Kungani iziphepho ziphendukela kolunye uhlangothi?
Izindishi ezinesimo esifaneleke kangcono, njengesigamu saseNyakatho ye-Atlantic kanye neNingizimu, umphumela uphambukisa imisinga yasolwandle. Enyakatho Nenkabazwe ibaphambukisela kwesokudla naseningizimu yezwe kwesobunxele. Kungokufanayo nangemimoya.
Ngokuqondene ne Amahemuhemu okusatshalaliswa kokuphenduka kwendlu yangasese e-Australia angamanga ngokuphelele. Aziphendukeli kolunye uhlangothi njengoba zenza kuwo wonke umhlaba ngenxa yalomphumela. Uma lokhu kwenzeka, kungenxa yokuthi abakhiqizi bazakhela ukuzungeza ngaleyo ndlela.
Ngakolunye uhlangothi, lezo ezijikeleza ngakolunye uhlangothi ngenxa yomphumela we-coriolis yiziphepho. Lezi zivunguvungu zilinganisa amakhilomitha amaningi futhi kungenzeka ukuthi ukweqisa kwazo kusezinhlakeni ezahlukene. Lapho lokhu kwenzeka, zizophenduka ziqonde kolunye uhlangothi endaweni ngayinye, ngoba ukuphela ngakunye kuzoba nesivinini esihlukile njengoba uMhlaba uzungeza. Ngakho-ke, izivunguvungu zigcina zivunguza.
Endabeni yemithala, amandla adonsela phansi abangela ukuba isikhungo somthala sibe semgodini omkhulu omnyama ojikelezayo futhi uhehe yonke into eseduze. Noma kunjalo, amandla adonsela phansi ayancipha njengoba sisuka enkabeni yemithala. Lokhu kubambezela okokusebenza futhi kudala umphumela ojikelezayo. Masingakhohlwa ukuthi isikhungo semithala sakhiwa ngu- umgodi omnyama.
Yize kwabanye akuyona into enesimo, i-coriolis force yinto ebaluleke kakhulu. Kwenzeka ezimweni eziningi eMhlabeni futhi kunesibopho sokuhamba kwemisinga yomoya nolwandle. Lokhu kuyinto ebalulekile okufanele uyicabangele lapho uhlela imizila yomoya yezindiza zentengiso.
Ngenxa yalolu lwazi, kuye kwenzeka ukuqonda okuningi ngokuguquguquka kwemithala, imisinga yomoya nemisinga yamanzi. Ku-meteorology isetshenziselwa ukubikezelwa kwalezi zimo zezulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi wazi okuningi ngomphumela we-coriolis
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Umphumela weCoriolis